Midowga Musharaxiinta oo dalbaday 4 qodob kadib shirkii Muqdisho (War-murtiyeed) - Caasimada Online
Home Warar Midowga Musharaxiinta oo dalbaday 4 qodob kadib shirkii Muqdisho (War-murtiyeed)
Midowga Musharaxiinta oo dalbaday 4 qodob kadib shirkii Muqdisho (War-murtiyeed)
Muqdisho (Caasimada Online) – Midowga Musharixiinta ayaa war-murtiyeed kasoo saaray shirkii seddexda maalin uga socday Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya, ee looga hadlayey xaaladda siyaasadeed ee dalka.
“Kulan saddex maalmood socday (August 14-16, 2021) ayaa maanta ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho. Kulamadaas oo ay ka soo qeybgaleen musharaxiinta ku bahoobay Golaha MIdowga MusharaxiInta Madaxweyne. Waxaa kulanka diiradda lagu saaray guud ahaan xaaladda dalku marayo, gaar ahaanna arrimaha doorashooyinka,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay.
Sidoo kale war-murtiyeedka ayaa lagu sheegay in golaha uu wadatashi la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada “Goluhu wuxuu kulamo Ia yeeshay Guddiga Doorashooyinka Heer-Qaran ee (FEIT), ururrada bulshada rayldka lyo beesha caalamka. Wuxuu kaloo Goluhu wadahadal Ia yeeshay Raysalwasaare Maxamad Xuseen Rooble. Goluhu wuxuu Ia qabaa fIlashada shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ee ahayd In doorashooyinkan ay ka fiicnaadaan kuwii dhacay 2012k11 lyo 2016k11.”
War-Saxaafadeedka Midowga Musharixiinta oo ka kooban laba Bog ayaa waxaa walaac looga muuijiyay sida ay ku bilowdeen Doorashooyinka Dalka, sidoo kalena ay u tagan yihiin xaqiijinta sidii ay dalka uga qabsoomi laheyd doorasho xor iyo xalaal ah, kuna dhacda habraac heshiis lagu yahay si dalka looga badbaadiyo xasilooni siyaasadeed oo horleh.
“Goluhu wuxuu walaac ka muujinayaa sida ay ku billowdeen doorashooyinka dalka. Goluhu wuxuu u taagan yahay xaqiijinta sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho xor iyo xalaal ah, kuna dhacda habraac heshiis lagu yahay, si dalka looga badbaadiyo xasillooni darro slyaasadeed oo hor leh,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay musharixiinta.
Midowga Musharixiinta ayaa dalbaday in habraaca doorashooyinka aqalka hoose ay noqdaan kuwa daah furan oo loo dhan yahay isla markaasna la ballaariyo shirka golaha wadatashiga qaran, wuxuuna golaha soo jeediyey qodobada soo socda:
Ugu dambeynti war murtiyeedka kasoo baxay midowga Musharixiinta ayaa waxaa lagu yiri
“Haddaba si taas loo xaqiijiyo Goluhu wuxuu ugu baaqayaa Ra’isulwasaare Rooble in uu ballaariyo kulanka ay ku ballansan yihiin madaxda madasha watashiga qaran si loo xaqiijiyo qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhacda si nabad ah, dalkana u horseedda xasilooni siyaasadeed.”
Halkaan hoose ka akhriso war-murtiyeedka oo dhameystiran